Isibhedlele seMbhedlele kunye noKhusela Freimaurer-retten.de
20. Fe bruwari 2018 Oliver Bienkowski
Freimaurer-retten.de - Phuma ugcine abantu! umkhumbi Hospital
Iposi ekhuniweyo By Oliver Bienkowski On 20. Fe bruwari 2018
Ukunceda bonke abantu kungakhathaliseki ukuba imvelaphi okanye inkolo yabo, oko kukuthi wethu msebenzi ngaphantsi ehlabathini lonke kunye nabazalwana nodade ikhonkco ubuntu, kwinqaku lokuqala Iintlekele kunye neimfazwe ku hlaleni. sicela nqakraza kwi Joyina phezu kwembhalo ezungeze zethu crowdfunding zu inkxaso.
Ukuqala sisebenza enye ukuya kumhlaba Isonka esinamathandathu ukuhambisa ukutya okuzinzileyo ngexesha leentlekele. Emanzini sizama ukuthenga isikhephe esathi umkhumbi Hospital ufuna ukuyisebenzisa.
Ibhakabhaka yezonka zesinkwa kunye nekhampasi yodonga. Ngobubanzi bee-5 ubude, i-oven enkulu ye-charven e-North Africa
Ngelo xesha sifuna ukuchasene mibono itulo ukulwa. Namhlanje sithetha, ngamanye amaxesha asifanelekanga iMasonsUkungaphenduli kwezi ngcamango eziphindaphindiweyo, kodwa ukwenza ishishini kwiindleko zethu kwi-Intanethi ubulungu obungenangqondo & Thembisa ukufaneleka. Ngexesha elifanayo, amaSulumane aye alahlekisa i-Freemasonry ngeHitler ngaphezu kweminyaka eyi-60. Nantsi sifuna zenkcukacha zoluntu ukukhanyisa apho sikunceda khona. Kwakhona amabandla kufuneka bayeke ukukhulula ukugweba, apha siza kuqhuba iziganeko zeenkcukacha kunye nathi Ukusebenza ngaphandle ngabemi khanyisa malunga Imvelaphi yoBukhululekile.
Umkhombe wokuloba waseMorocco kufuneka uguqulwe ube ngumkhumbi wabhedlele ukuze usebenze kwimimandla yemfazwe kunye nabantu kungakhathaliseki ukuba imvelaphi okanye inkolo ukunceda.
Ixabiso elincinci liya kuba yindawo yokuloba. Ngokuxhomekeke kumaninzi amanini esiwaqokelelayo, nokuba ngaba omnye oosomashishini bethu abazizityebi phakathi kwabazalwana noodade basisondeza, nqanawa e kuloba ibe. Sifuna isikhephe sibe sisincinane umkhumbi esibhedlela basebenzise malunga nabazalwana kunye nodadewethu imisebenzi yokuhlinzwa kwaye unyango lwamazinyo kwiindawo zemfazwe neentlekele. Sekunye igumbi lokusebenza kuphela & a I-Dentist StuhNdikwazi ukwenza ezininzi Londoloza ubomi, Si khumbula Oskar Schindler owathi, "Lowo osindisa ubomi obunye kuphela usindisa ihlabathi lonke ".
I-COmmandant Fourcault iya kuba yintlephelo yezibhedlele kwaye ingasetyenziswa ngokukhawuleza kwimfazwe yaseYemen.
Njengamanje sinezibonelelo ezimbini ezikhoyo zamanqana amabini amakhulu, i-Commandant Fourcault e-Antwerp kunye ne-Aquarius Dignitus, iinqanawa zokuhlangula zakudala ze-SOS Mediterrane e-Cadiz. Zomibini iinqanawa zibiza kakhulu nge-1.800.000 kunesikebhe sokudala. Kwi-Freemasonry, kukho abazalwana kunye noodade abanokwenza iindleko ezinjalo kwiinkalo zehlabathi ze-Freemasons, kodwa nathi kufuneka sibaqinisekise ukuba baqalise ukulwa nosizi lweemfundiso zehlabathi kunye neengxoxo. Kule nto sidinga uncedo loMzalwana. Kuphela ngoncedo lwakho, iingxoxo zakho, sibaxhasa abalandeli abaneleyo kwintsimi ukugcina le projekthi iphila.
U-Aquarius uhlangene nabantu abangama-30.000 ekuhluphekeni kwaye ngoku uhlala eCadiz
Kakade, esi sicwangciso ayenziwanga kwiminyaka 3 eyadlulayo, umseki inkampani seSiseko-nzuzo Pixel Mncedi ukuba uya kuba nesisombululo esiya Masonic Relief neMisebenzi Arhente, sele usebenza 2015 ntliziyo lo mbutho nokwandisa eAfrika izibonelelo eziyimfuneko ukuze emva kokufa kwakhe nabanye abazalwana uthumo "Ukuhlangula iMasonic" inokuqhubeka. Kule nto, i-2019 isayine i-3 yonyaka yokuqeshisa ngo-Julayi, eqinisekisa imisebenzi yethu kwisiza eMorocco. Emva koko kufuneka sithenge umhlaba okanye sandise ukuqeshisa.
UMzalwan & uMsunguli woLuntu oPhumela iiFree Freemasons kunye no-Freemason umculi u-Otmar Alt & Snoopy
Kwaye ngoku ke abazalwana kunye noodadewethu: "Phuma uye ehlabathini uze uzibonakalise unguMason!" - Esi sigwebo esivuthayo siyasebenza, nangona siza kususa zonke izimbolo kunye neengxelo ezivela kwi-Freemasonry. Siza kufuneka siqikelelwe kwaye sigwetyelwe ngulo Mthetho!
Izibane ezinkulu ze-3 zamaMasoni kwivili elingaphantsi.
I-logo ye "Gcina iMasons"
Sicela iYurophu Yomanyano ukwakha ibhuloho edibanisa iSpeyin neMorocco ukuze iququzelele inani elikhulayo lemozulu kunye nababaleki bemfazwe kwisikhululo se-European reception.
Ngenxa yendawo esihlala kuyo eMorocco, sinethuba lokuvuselela ngokukhawuleza le nqanawa, ukwakha iteknoloji yezobuchwephesha kwiikhabhi kunye nokudala indawo ephezulu ye-teknoloji. Njengentlangano engenzi nzuzo, i-PixelHELPER iya kubandakanyeka abasebenzi beengcali kunye nokuqinisekisa ukusetyenziswa kwezinto ezihamba phambili kunye ne-intanethi ye-intanethi. I-PixelHELPER ibeke iinjongo zokubonelela ngoncedo kunye nenkqubo yesondlo esilungeleleneyo.
Ukongeza kwiividiyo ezivela kubhakabhaka yaseDosenbrot, sisasaza rhoqo iiklip zevidiyo ezivela kwiinqanawa. Sifuna uncedo lwakho ukuthenga isikhephe. Ngokukhawuleza xa siqokelele i-85.000 €, sithenga isikebhe sokuloba kwaye siqala ukwandiswa eMorocco. Ukuba, kwimeko enzima kakhulu, imali ayihlanganisi kwiintsuku ezilandelayo ze-365, siya kutyalomisa kwisibonelelo sethu esingxamisekileyo sesonka eMorocco.
Kulapho sidinga umshini wezonka wesikhombi, isitya sokuthutha kunye nomxube wezoshishino ukuze ubhabhise amawaka ezonka ezenziwe ngamanqwanqwa kwiintshukumo eziliqela ngosuku kwaye uzigcine ezikhupha zokuthumela. Kodwa siqinisekile ukuba sifuna ukugcina iMasons kwaye siyifumana imali efunekayo kunye.
I-akhawunti yomnikelo we-paypal: paypal@PixelHELPER.tv
Umnini we-Akhawunti: i-PixelHELPER Foundation engekho inzuzo GmbH
Igama elingundoqo: Uncedo kubantu kwiimeko ezingxamisekileyo
I-2015 yazama i-PixelHELPER njengenhlangano yokuqala emva koLwandle lwe-Watch ukuze ifumane i-Boojenleger Liberty kwiMeditera
Kutheni umbutho weMasonic ochaphazelayo
I-PixelHELPER, i-minority non-profit entity and human rights organization ephefumlelwe yiminqweno yamaFree Freasons. Ingaphepheli ngxolo yehlabathi, sihamba ngendlela yethu, sizolile kwaye sikhuselekile, sinoyiki engozini, iinjongo eziphezulu engqondweni ukukhusela umhlaba. Inkolelo eyintloko kukuba imigaqo yeNgqungquthela yesiFrentshi "Inkululeko, ukulingana ngokobudlelwane" kwakudingeka ukulwa nokuphindaphinda kokungakhathaleli kwezopolitiko. Amalungu amaMasonic asePixelHELPER afuna, njengamaxesha e-Revolution yesiFrentshi, ukuzikhusela ngokuchasene nokungabikho kokusesikweni naphi na apho ivela khona. Kwiminyaka emininzi i-freemasons iyenziwe kwizinto ezilungileyo kwihlabathi kwaye uzama ukuba ngumzekelo owenzayo ngezenzo zabo. Ngokuqinisekileyo kwisiqubulo esithi: "Zazi ngokwakho!", Amalungu azama kunye kunye nokubeka ikhonkco lomntu phezu kwehlabathi.
I-PixelHELPER yasungulwa ngonyaka we-2011 ngumculi okhanyayo kunye no-Oliver Bienkowski kunye nabaxhasi be-70 kunye nabo, kuquka ii-6 nezinye iindawo zokuzikhethela. I-Freemasonry iyintlangano yobudlelwane, umbutho oqhelanisiweyo wokuziphatha, uluntu olusungulwayo kunye no-Werkbund ongokomfanekiso, ozalwa ngaphandle kwesiko se-European Lighting. Ngeendawo ezixabisekileyo zentlalo, ubundlobongela, inkululeko, ubulungisa, uthando loxolo kunye nokunyamezela, lunikeza ukuqhelaniswa kunye nemigangatho yeengcamango nezenzo zamalungu ayo.
Injongo ye-Confederation ye-Masonic ukufundisa amalungu ayo ngobunyani bokwenene. Iindlela zokwenza oku kukusebenzisa imilinganiselo yokufuzisela kwii-huts ephakathi, umyalelo wokubambisana wezinto ezibalulekileyo zobuntu, ukuhlakulela okufanelekileyo kunye nokuvuselelwa kobuhlobo bokwenene kunye nothando lobuzalwana. Wonke umntu kufuneka asasaze le migaqo ngaphandle kwe-Lodge, ukukhuthaza ukukhanya kunye nokuchasana nokunyamezela. Kuloo ndawo amalungu ayavuselelwa ngamava ahlanganyelweyo kunye nesithethe sokuzimela. Ngokukhuthaza isidima somntu, ukuhlakulela ubuzalwana, nokwenza uthando, iiMasons zifuna ukuqonda iingcamango zoluntu.
Ukufakelwa kweLayser Installation "Ukusuka kwi-Rainbow" i-Orlando Attack, eDusseldorf eJamani
Freimaurer-retten.de - Phuma ugcine abantu! umkhumbi Hospital Julayi 19th, 2019Oliver Bienkowski
App Android Bahrain 13 Chancellery Federal iTshayina inkxaso-mali Daphne Caruana Galizia bahlukunyezwa freeRaif ukubonakalisa inkululeko Greece uncedo lwabantu Khusela i intatheli umkhankaso nemikhankaso nase- Uthando alukwazi imida Umthombo philayo imifula Live I-Livestream imokelo yoncedo Morocco NSA endlwini amabanjwa ezopolitiko I-Rainbow yeOrlando isikrweqe Saudi Arabia igcwele Help spring spring Spirulina Uighurs Uyghur ukuzimela United Stasi yaseMelika iingalo trade Ewe sihlola! esweni